တင်ကြီးတာကို ဆီလီကွန်ထည့် ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ် အမှ န် အတိုင်း ပြောပြလာတဲ့ မမဆောင်း – Zartiman
တင်ကြီးတာကို ဆီလီကွန်ထည့် ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ် အမှ န် အတိုင်း ပြောပြလာတဲ့ မမဆောင်း
မမဆောင်းက “မော်လမြိုင်သူမို့ကိုယ်လုံးကွက် ကွက်ကွင်းကွင်းနဲ့ အဲဒီလိုဖြစ်နေ တာမို့ကိုယ့်ကိုချစ်လို့စတာပဲသဘောထားပါတယ်။ ဘယ် လိုမှလည်းစိတ်မရှိပါဘူး သူတို့ Troll တဲ့ သူတွေကြောင့် မမဆောင်းဆိုပြီးချစ်တဲ့သူတွေလည်းများလာတဲ့အတွက် အဲ့လိုစနေတဲ့ ပရိသ တ် တွေတိုင်းကို မမဆောင်းက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်” လို့ဆိုလာခဲ့တာဖြစ် ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ မမဆောင်းကတော့ ဆီ လီကွန်ထည့်ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့ အပေါ်ပြန်လည်ဖြေရှင်း လာ ခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီးချော ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းကတော့ ပရိတ်သတ်ချစ် မင်းသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ် တ ည် နေသူဖြစ်ပြီး မိဘအမွေတွေကို တစ် ယောက်တည်း ရရှိခဲ့တာကြောင့် အလှူအတန်းများကို မ ပြ တ် ပြုလုပ်နေသူပါ။သူမဟာ ”ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ် လား ? ဘောလုံးဥက္ကဌ လား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေက မြင့်တက်လာရာမှ ပရိသတိစိတ်ဝင် စား ခံ လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ မမဆောင်းက ဆီလီကွန်ထည့်ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေ ဖန်နေကြတဲ့။
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့ တာ ပါ။“မမဆောင်းကအရမ်းရှက်တတ်တယ်၊ ဆီလီကွန် တွေဘာ တွေတော့မထည့်ဖြစ်ဘူး၊ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေဆိုရင် ရှောင်ပါတယ် ဆေးရုံလည်းမတက်ရဲဘူးလေ ဘောင်းဘီနှစ်ထပ် တွေ ဘာတွေလောက်ပဲ ဝတ်ဖြစ်တာပါ။ သူများတွေအရမ်းလှနေရင်အားကျတယ်။ ကိုယ်ကတော့ သ တ္တိ ကတော့လုံးဝမရှိဘူး၊ လိုင်းပေါ် မှာ တင်ပါး ပို့စ်Selectionတွေလုပ်ပြီးစကြတယ် ”ဆိုလာခဲ့ တာ ပါ။
REF: Saung Eaindary Htun Facebook
မမဆောငျးက “မျောလမွိုငျသူမို့ကိုယျလုံးကှကျ ကှကျကှငျးကှငျးနဲ့ အဲဒီလိုဖွဈနေ တာမို့ကိုယျ့ကိုခဈြလို့စတာပဲသဘောထားပါတယျ။ ဘယျ လိုမှလညျးစိတျမရှိပါဘူး သူတို့ Troll တဲ့ သူတှကွေောငျ့ မမဆောငျးဆိုပွီးခဈြတဲ့သူတှလေညျးမြားလာတဲ့အတှကျ အဲ့လိုစနတေဲ့ ပရိသ တျ တှတေိုငျးကို မမဆောငျးက ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ပွောခငျြပါတယျ” လို့ဆိုလာခဲ့တာဖွဈ ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ မမဆောငျးကတော့ ဆီ လီကှနျထညျ့ထားတယျ ဆိုပွီး ဝဖေနျနကွေတဲ့ အပျေါပွနျလညျဖွရှေငျး လာ ခဲ့ တာပဲဖွဈပါတယျ။
မငျးသမီးခြော ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျးကတော့ ပရိတျသတျခဈြ မငျးသမီး တဈယောကျအနနေဲ့ရပျ တ ညျ နသေူဖွဈပွီး မိဘအမှတှေကေို တဈ ယောကျတညျး ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ အလှူအတနျးမြားကို မ ပွ တျ ပွုလုပျနသေူပါ။သူမဟာ ”ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ရဲ့ခဈြသူဟာ ဆရာဝနျလား? စဈဗိုလျ လား ? ဘောလုံးဥက်ကဌ လား? “ဆိုပွီးတော့ ဝဖေနျမှုတှကေ မွငျ့တကျလာရာမှ ပရိသတိစိတျဝငျ စား ခံ လာခွငျးဖွဈပါတယျ။ ယခု ရကျပိုငျးမီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခုမှာတော့ မမဆောငျးက ဆီလီကှနျထညျ့ထားတယျ ဆိုပွီး ဝေ ဖနျနကွေတဲ့။
ပရိတျသတျတှရေဲ့ ပွောဆိုမှုတှေ ကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွနျလညျဖွရှေငျးလာခဲ့ တာ ပါ။“မမဆောငျးကအရမျးရှကျတတျတယျ၊ ဆီလီကှနျ တှဘော တှတေော့မထညျ့ဖွဈဘူး၊ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျတာတှဆေိုရငျ ရှောငျပါတယျ ဆေးရုံလညျးမတကျရဲဘူးလေ ဘောငျးဘီနှဈထပျ တှေ ဘာတှလေောကျပဲ ဝတျဖွဈတာပါ။ သူမြားတှအေရမျးလှနရေငျအားကတြယျ။ ကိုယျကတော့ သ တ်တိ ကတော့လုံးဝမရှိဘူး၊ လိုငျးပျေါ မှာ တငျပါး ပို့ဈSelectionတှလေုပျပွီးစကွတယျ ”ဆိုလာခဲ့ တာ ပါ။
အိမ်မှာနေရင်း အမိုက်စားကကွက်လေးနဲ့ စည်းချက်ညီညီ ကပြထားတဲ့ ခေးဆက်သွင်